Itoophiyaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 5:055:05
'Mee Gabbarri haa hafu' - Sirba haaraa Faayoo Mootii ijoo dubbii ta'e
Dhiyeenya kana sirbi haaraan 'Mee Gabbarri haa hafu' jedhu kan Faayoo Mootii weelliste miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta'ee ture, sababiin isaa ammoo dhimma ijoo Qeerroofi Qarree fuudhaafi heeruma gahanii kaase waan ta'eef.
...tti maxxanfame 4:574:57
Konkolaataawwan deeggarsa namoommaa fe'an 79 Maqalee galan -WFP
Dhaabbanni Nyaata Addunyaa (WFP) konkolaataawwan deeggarsa namoomaa fe'an 79 torbana kana keessaa Maqalee galan jedhe.
...tti maxxanfame 11:16 27 Sadaasa 202111:16 27 Sadaasa 2021
'Iddoowwan finciltoonni Tigraay to'atanitti manneen barnootaa kuma 2 ol manca'an'
Naannolee Amaaraa fi Affaar iddoowwan finciltoonni Tigraay to'atanitti manneen barnootaa kuma 2 ol barbadaa'uu mootummaan hime.
...tti maxxanfame 8:16 27 Sadaasa 20218:16 27 Sadaasa 2021
Kaaba Itoophiyaatti lakkoofsi namoota deeggarsa barbaadanii mil. 9.4 gahe - UN
Kaaba Itoophiyaatti waraana gaggeeffamaa ture hordofee lakkoofsi namoota deeggarsa ariifachiisaa barbaadanii miliyoona 9.4 gahuu Dhaabbatni Mootummoota Gamtoomanii hime.
...tti maxxanfame 6:24 27 Sadaasa 20216:24 27 Sadaasa 2021
Viidiyoo 'marii dippiloomaatota lixaa' miliqee bahe irratti maaltu jedhame?
Viidiyoon miliqfamee baafame jedhame kan dippiloomaatonni duraanii fi ammaa Ameerikaa fi biyyoota lixaa tokko tokko lammilee Itoophiyaa bebbeekamoo fi bakka bu'aa TPLF waliin dhimma Itoophiyaarratti wayita mari'atan agarsiisu tibbana dubbii ijoo ta'eera.
...tti maxxanfame 5:53 27 Sadaasa 20215:53 27 Sadaasa 2021
Tarraakii፡ Appii kitaabaa seenessu
Bara darbe weerarri koronaavaayirasii namoota hunda manatti wayita dachaasetti Naahomiifi Tsaggayeen kitaaba kitaaba dubbisuuf fedha horatan. Akka duraan baratametti dubbisuu hin feene. Kanaaf appilikeeshinii kitaaba seenessu hojjetan.
...tti maxxanfame 12:13 26 Sadaasa 202112:13 26 Sadaasa 2021
Humni waraanaa Itoophiyaa' Cifraa to'achuun gara Baatii fi Kombolchaatti qajeeluun' himame
MM Abiy Ahimed Kibxata darbe gara adda waraanaatti imaluun qaamaan waraanaa akka hoogganan erga ibsanii booda, har'a yeroo jalqabaatiif miidiyaatti mul'achuun adda waraanaatti 'milkaa'aa' akka jiran himaniiru.
...tti maxxanfame 4:50 26 Sadaasa 20214:50 26 Sadaasa 2021
Itoophiyaan oolmaa dirree waraanaa miidiyaatti himuu fi gabaasuu dhorkite
Qajeelchi /Izziin/ labsii yeroo muddamaa sochiileen loltummaa, olmaan dirree waraanaa fi bu'aaleen waraanaa kamuu miidiyaan akka hin gabaafamne dhorke.
...tti maxxanfame 15:47 25 Sadaasa 202115:47 25 Sadaasa 2021
Itoophiyaan US akeekkachiifte, hiriirri mormii Imbaasii US fuuldura taasifame
Mootummaan Ameerikaas ta'e Imbasiin biyyattii Finfinnee jiru haala nageenya Itoophiyaa jiru ilaalchisee ibsawwan baasan hanqina itti gaafatamummaa kan hin qabnedha jechuun mootummaan Itoophiyaa komate.
...tti maxxanfame 13:48 25 Sadaasa 202113:48 25 Sadaasa 2021
Dabra Birhaan namoota waraqaa eenyummaa magaalattii hin qabne dhorkite
Naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birihaaniitti Sadaasa 25 irraa kaasee namoonni waraqaa eenyummaa galaatattii hinqabne sochii akka hintaasifneef dhorkamu bulchiinsii magaalattii beeksiise.
Page 1 Keessaa 100